Samsung ga - eji dochie anya “Smart Glow” | Gam akporosis
Samsung 'Smart Glow' nke Samsung rutere iji megharia ọkwa LED
Onye na-enweghị ike bi ugbu a na-enweghị ọkwa LED gị ịmara na anyị ga-enwe ozi Telegram mgbe ọ na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mgbe otu WhatsApp na-eche anyị. Akụkụ ekwentị nke ọtụtụ ndị nrụpụta na-etinye site na etu anyị siri mara tupu oge eruo ihe na-echere anyị na ekwentị mgbe anyị meghere ya.
Samsung nwekwara ya na smartphones ya, mana n'oge na-adịghị anya ọ nwere ike iji ihe ọ nwere dochie ọrụ a kwuru na dị ka «Smart mukee». Njirimara nke mejupụtara mgbanaka na-enwu gbaa nke gbara gburugburu azụ nke ngwaọrụ ahụ ma gwa ndị ọrụ banyere oku na ederede, mana mgbe batrị dị ala ma ọ bụ ruru ụgwọ zuru ezu.
Isi ọrụ nke "Smart Glow" bụ maka ọkwa, mana ọ na - enyekwa aka na foto akpọrọ selfies. Ọ bụrụ na onye ọrụ echee iji foto igwefoto nke ekwentị ha see foto, n'azụ, onye nnyemaaka akpọrọ "Selfie Assist" nke Smart Glow ga ọ ga-agbanye mgbe ọ hụrụ ihu gị, nke mere na ọ na-akpaghị aka na-ewe a snapshot sekọnd ole na ole mgbe e mesịrị.
Samsung ekwentị mbụ nwere ngosipụta pụrụ iche ga-abụ na nso nso Galaxy J2, nke ugbu a kara aka iru India. Samsung agabeghị ọkwa ọkwa nke njirimara ahụ, ebe ọ bụ na n'oge ahụ esiteghị n'ọnụ ya pụta ma ọ bụrụ na ọ ga-apụta na Galaxy Note 7 ọzọ, anyị maara ọtụtụ ihe banyere, ma ọ bụ njedebe nke usoro Galaxy S n'ọdịnihu.
Ihe na-adọrọ mmasị nke ga-anwa iji dochie ikanam ahụ ọ fọrọ nke nta ka e guzobe ya n'ọtụtụ nke ekwentị na nke ahụ na-enye anyị ohere ịchekwa ọrụ nke ịgbanye ekwentị mgbe anyị matara na anyị anatala ozi WhatsApp ma anyị achọghị ikwukọrịta, maka ihe kpatara ya, ya na onye ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung 'Smart Glow' nke Samsung rutere iji megharia ọkwa LED
Morningtụtụ ọma ... M na-ekwu, ha wepu ihe ngosi ikanam site na ihuenyo wee tinye ya na mkpuchi? ma ugbu a, anyị ga-ahapụ ihuenyo n'okpuru ekwentị iji hụ ihe ngosi bụ ... gosiri na ọ bụ naanị otu ụzọ na-etinye ya dị ka nke ahụ n'ebe! hahahaha ma na aka nke ozo ezi ihe a banyere ihe mmetụta maka ndi Selfies! Anyị ga-ahụ etu ika si aga! Ekele si Honduras!
Zaghachi Miguel Rosa
Ekele Miguel Rosa !!!